Naya Post Nepal | घोडाले मानिस हैन मानिसले घोडा बोकेको कहिलै देख्नु भयो ? (भिडियो)
घोडाले मानिस हैन मानिसले घोडा बोकेको कहिलै देख्नु भयो ? (भिडियो)
काठमाडौं । सामान्यतया घोडाले मानिसलाई बोक्न सक्छ । तर के मानिसले घोडालाई बोक्न सक्छ ? यो सुन्दा मात्रै पनि मानिसहरु हैरान हुन्छन् तर यो सत्य हो । केही मानिसहरूलाई घोडा चढ्न मनपर्छ । ऊँट चढ्न मन पराउनेहरु पनि हुन्छन् ।
२०७९ बैशाख २३, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 680 Views